ဘ၀လက်တွဲဖေါ်စစ်_မစစ်_စမ်းသပ်နည်း – Tameelay
( အော်အော့ လုပ်နေပြီဆို ဆောင့်ကန်ထားခဲ့…
အားရပါးရ ရှိန်မနေပဲ စားနေပြီဆို အချစ်စစ်ပြီ
သေတဲ့အထိ လက်တွဲမယ့်သူက ရွံနေဖို့လိုလို့လား )
~တစ်ရေးနိုး သန်းခေါင်ကျော် ဖုန်းထခေါ်ကြည့်ပါ။
( ဘယ်လောက်ခေါ်ခေါ် မကိုင်ဘူးဆို ခေါက်ပစ်လိုက်…
စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ ပျာပျာသလဲ ပြန်ထူးရင် အချစ်စစ်ပြီ
ချစ်သူအတွက်ဆို အမြဲ On Duty ဖြစ်နေရမယ်လေ )
~ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ ခေါင်းပိတ်ခေါက်ကြည့်ပါ။
( ဒေါသထွက်ပြီး ရန်ပြန်တွေ့တယ်ဆို ဝဲပစ်လိုက်တော့…
စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ ပြန်ရယ်ပြနေရင် လုံးဝ လက်တွဲဖေါ်စစ်ပြီ
ရစ်တဲ့ဆိုးတဲ့ ဒဏ်လေးတော့ ခံနိုင်ရည်ရှိရမှာပေါ့ )
~ ခြံစည်းရိုး အနိမ့်တစ်ခုလောက် ခုန်ကျော်ခိုင်းကြည့်ပါ။
( ရွှိဆို ခုန်သွားတယ်ဆို နောက်နေ့ကစ ဖြတ်လိုက်တော့…
အိနြေ္ဒရရနေတယ် မခုန်ဘူးဆို ဖိတ်စာပြေးရိုက်သင့်ပြီ
ခြံခုန်စရှိတဲ့သူက နောက်တစ်ခါ ခုန်နေဦးမှာပဲလေ )
~ဖုန်းဘေလ် ပြတ်ချင်ယောင်ဆောင် ထည့်ခိုင်းကြည့်ပါ။
( အင်းအဲလုပ်ပြီး စကားလမ်းလွှဲရင် လမ်းသာခွဲလိုက်…
တစ်သောင်းကဒ် ဂွက်ဆို လှမ်းထည့်ပေးရင် အချစ်စစ်ပြီ
ကပ်စေးနှဲကို တစ်ဘဝလုံးစာ ဘယ်လိုအားကိုးရမလဲ )
~ရုတ်တရက် နင်နဲ့ငါပြတ်ပြီ ထပြောကြည့်ပါ။
( ပြတ်တယ်ဟာဆိုပြီး ပေါက်ကွဲသွားရင် လွှင့်သာပစ်လိုက်…
တောင်းပန်ပါတယ် ခွဲမသွားပါနဲ့ ငိုပြနေရင် အချစ်စစ်ပြီ
တကယ်ချစ်ရင် ဘယ်လိုကြောင့်မှ အဆုံးရှုံးမခံဘူး )
( မျက်နှာသေနဲ့ ခံစားချက်မဲ့တာမျိုးဆို Go ခိုင်းလိုက်…
သူကပါ နှပ်ရည်ကျတဲ့အထိ လိုက်ငိုနေရင် Real ပဲ
လက်တွဲဖေါ် အစစ်က သင်မျက်ရည်ကျရင် သူပါ Auto
( အျောအော့ လုပျနပွေီဆို ဆောငျ့ကနျထားခဲ့…
အားရပါးရ ရှိနျမနပေဲ စားနပွေီဆို အခဈြစဈပွီ
သတေဲ့အထိ လကျတှဲမယျ့သူက ရှံနဖေို့လိုလို့လား )
~တဈရေးနိုး သနျးခေါငျကြျော ဖုနျးထချေါကွညျ့ပါ။
( ဘယျလောကျချေါချေါ မကိုငျဘူးဆို ခေါကျပဈလိုကျ…
စိုးရိမျတကွီးနဲ့ ပြာပြာသလဲ ပွနျထူးရငျ အခဈြစဈပွီ
ခဈြသူအတှကျဆို အမွဲ On Duty ဖွဈနရေမယျလေ )
~ဘာမပွော ညာမပွောနဲ့ ခေါငျးပိတျခေါကျကွညျ့ပါ။
( ဒေါသထှကျပွီး ရနျပွနျတှတေ့ယျဆို ဝဲပဈလိုကျတော့…
စပျဖွဲဖွဲနဲ့ ပွနျရယျပွနရေငျ လုံးဝ လကျတှဲဖျေါစဈပွီ
ရဈတဲ့ဆိုးတဲ့ ဒဏျလေးတော့ ခံနိုငျရညျရှိရမှာပေါ့ )
~ ခွံစညျးရိုး အနိမျ့တဈခုလောကျ ခုနျကြျောခိုငျးကွညျ့ပါ။
( ရှိဆို ခုနျသှားတယျဆို နောကျနကေ့စ ဖွတျလိုကျတော့…
အိန်ဒွရေရနတေယျ မခုနျဘူးဆို ဖိတျစာပွေးရိုကျသငျ့ပွီ
ခွံခုနျစရှိတဲ့သူက နောကျတဈခါ ခုနျနဦေးမှာပဲလေ )
~ဖုနျးဘလျေ ပွတျခငျြယောငျဆောငျ ထညျ့ခိုငျးကွညျ့ပါ။
( အငျးအဲလုပျပွီး စကားလမျးလှဲရငျ လမျးသာခှဲလိုကျ…
တဈသောငျးကဒျ ဂှကျဆို လှမျးထညျ့ပေးရငျ အခဈြစဈပွီ
ကပျစေးနှဲကို တဈဘဝလုံးစာ ဘယျလိုအားကိုးရမလဲ )
~ရုတျတရကျ နငျနဲ့ငါပွတျပွီ ထပွောကွညျ့ပါ။
( ပွတျတယျဟာဆိုပွီး ပေါကျကှဲသှားရငျ လှငျ့သာပဈလိုကျ…
တောငျးပနျပါတယျ ခှဲမသှားပါနဲ့ ငိုပွနရေငျ အခဈြစဈပွီ
တကယျခဈြရငျ ဘယျလိုကွောငျ့မှ အဆုံးရှုံးမခံဘူး )
( မကျြနှာသနေဲ့ ခံစားခကျြမဲ့တာမြိုးဆို Go ခိုငျးလိုကျ…
သူကပါ နှပျရညျကတြဲ့အထိ လိုကျငိုနရေငျ Real ပဲ
လကျတှဲဖျေါ အစဈက သငျမကျြရညျကရြငျ သူပါ Auto
ကိုယ်​တန်​ဖိုးထားရသူ​တွေ ကိုယ့်​အနားကရှင်​ကွဲ မခွဲရ​အောင်​ နည်းလမ်း​လေး​တွေ တင်​ပြပါရ​စေ….
“မဆုံးရှုံးရ​အောင်​…..” ကိုယ်​တန်​ဖိုးထားရသူ​တွေ ကိုယ့်​အနားကရှင်​ကွဲ မခွဲရ​အောင်​ နည်းလမ်း​လေး​တွေ တင်​ပြပါရ​စေ…. ၁)အပြစ်​တင်​စကား​ပြောခြင်း ​ရှောင်​ပါ လူဆိုတာ အမှားမကင်းပါဘူး ဆင်​ခြင်​တုံတရား အနည်းအများအ​ပေါ်မူတည်​ပြီး အမှားအကြီးအ​သေးပဲ ကွာခြားပါလိမ့်​မယ်​ ကိုယ်​အားသန်​ထူးချွန်​တာနဲ့ သူထက်​မြက်​တာ မတူသလို ကိုယ်​ကြိုက်​တာနဲ့ သူကြိုက်​တာလည်း ကွာခြား​နေတတ်​ပါတယ်​။ ကိုယ့်​အတ္တကို ​ရှေ့တန်းတင်​ပြီး ​ကောင်း​စေချင်​လွန်းတဲ့ ​စေတနာ​ကြောင့်​ သူ …
ချစ်​တယ်​ဆိုတာ – ဥုး ၀ိစိတ္တ (ကျွန်းကုန်း)
တစ်​ခါတုန်းက ကာသိတိုင်း၊ ပါဋလိပုတ်​မြို့မှာ အဿကဆိုတဲ့ ဘုရင်​ကြီးတစ်​ပါး ရှိခဲ့တယ်​။ ဘုရင်​ကြီးမှာ ဥပရီ ​ခေါ်တဲ့ သိပ်​လှတဲ့ မိဖုရား တစ်​ပါးလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်​။ ဘုရင်​ကြီးဟာ မိဖုရား ဥပရီကို အရမ်းချစ်​မြတ်​နိုး​တော်​မူတယ်​ ။ မိဖုရား ဥပရီဟာ ငယ်​ရွယ်​ပြီး ​ချော​မောလှပတဲ့ အပြင်​ မာနကလည်း ကြီးပါတယ်​။ …
သင့်ချစ်သူက ဖောက်ပြန်နိုင်သူမဟုတ်ကြောင်း သိသာစေမယ့် အချက်အလက်များ
သမီးရည်းစားကိစ္စတွေမှာ ဖောက်ပြန်လို့ လမ်းခွဲခဲ့ရတာတွေ အများကြီးပါ ။ လူတစ်ယောက်မှာ ဖောက်ပြန်နိုင်ခြေနည်းကြောင်း သိသာစေမယ့် အချက်လေးတွေကို အပြုသဘောဆောင်ကာ ရေးသား ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ ၁။ဝင်ငွေထပ်တူနီးပါးကျတယ် အမေရိကန် လူမူကွန်ယက်ဆိုင်ရာ သုတေသန ပြုလုပ်ချက်အရ သင့်ချစ်သူဟာ သင်နှင့် ဝင်ငွေလစာ ထပ်တူနီးပါးကျလျှင် လှည့်စားနိုင်ခြေ နည်းပါးသည်ဟု သိရသည် ။ …